Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာဘယ်လိုသုံးရမလဲ Androidsis
Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ကြီးစွာသော Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူကိုအထူးသဖြင့်သူ့ထင်မြင်ချက်ကို YouTube တွင်ထားခဲ့သည့်သုံးစွဲသူမှယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်အလွန်ကောင်းသော application တစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါသည်။ အမြစ်မလိုအပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏အသိပေးချက်ကုလားကာပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည် Android P သတိပေးချက်ကုလားကာ.
ဒါကြောင့် Android အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထိရောက်တဲ့အခမဲ့ application တစ်ခုကို download နှင့် install လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတော့မှာပါ Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာစတိုင် များစွာသော configuration များနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူပေမယ့်။
ဒါကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် Google Play Store မှာရရှိနိုင်တဲ့ application တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုသည်၊ ကြော်ငြာများနှင့်ပေါင်းစပ် In-app ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအခမဲ့ app ကိုသို့သော်၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းနှင့်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမျိုးမှမလိုအပ်ဘဲ၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းအတွက်လုံးဝအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏အသိပေးချက်ကုလားကာစတိုင်ကိုပြောင်းပါ အရာတစ် ဦး သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
အပလီကေးရှင်းသည်နာမကိုတုံ့ပြန်သည် ပါဝါအရိပ် ဒီလိုင်းတွေအောက်မှာ Android အတွက်တရားဝင် application store ကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ဖို့ link တစ်ခုထားပေးပါတယ်။
1 Power Shade ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းပြီး Power Shade ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
2.1 Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
2.2 သင်၏ Android P အကြောင်းကြားစာကိုကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် Power Shade ရွေးစရာများ
Power Shade ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Power Shade Panel မှအသိပေးချက်
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းပြီး Power Shade ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
ပါဝါအရိပ် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်နှင့် ၄ င်းကိုစနစ်တကျလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက်လေးခုကိုခွင့်ပြုခြင်းကဲ့သို့အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ခွင့်ပြုချက်လေးခုသည် ရေးသားခွင့်ရရှိသည်, အသိပေးချက်များကိုရယူခြင်း, မျက်နှာပြင်ထပ်မှဝင်ရောက်ခွင့် အခြားအက်ပ်များအထက်တွင်ပြသရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android operating system ၏။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် Not Running ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး Running ကိုပြပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာငါတို့မျောနေတာလဲ၊ မှော်ဆရာလိုပြောရမယ်ဆိုရင် Android P ရဲ့ notification curtain ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ၄ င်း၏ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပုံစံကိုအဖြူရောင်ဖြင့်အပြာရောင်တန်ချိန်များဖြင့်ဖော်ပြသည်။
သင်၏ Android P အကြောင်းကြားစာကိုကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် Power Shade ရွေးစရာများ
လျှောက်လွှာဆက်တင်များအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာသည် Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာကိုညှိ။ ညှိရန်အပိုင်း ၄ ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစုပေါင်းအရသာရန်။ ဒီ app လေးရဲ့အဓိကအပိုင်းလေးခုကိုရှာနိုင်သည်။
ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ settings ကိုအသီးအသီးအတွင်းမှာပဲငါတို့အဘို့အလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည် Toogles ကုလားကာ၏နောက်ခံအရောင်ကိုပြောင်းပါ, အသတိပေးချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏နောက်ခံအရောင်, Toogles သူတို့ကိုယ်သူတို့၏အရောင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံအတွက် mode ကိုနှင့်ချိတ်ဆက် mode မှာနှစ် ဦး စလုံး, တောက်ပမှုအဆင့်ဘား၏ဒီဇိုင်းနှင့်ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြသောအခြားအရာများစွာကိုအတွက် ငါဒီ post ၏အစအ ဦး မှာကျန်ကြွင်းရစ်သောပူးတွဲပါဗီဒီယို။
ဤ configuration options များအတွင်း၌၎င်းတို့အားအသုံးပြုရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ယခုငါပြောမည်ဖြစ်သော်လည်းငွေပေးချေမှုလျှောက်လွှာကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို၎င်း၏အခမဲ့ mode တွင်အသုံးပြုနေပြီးအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Huawei P20 Pro တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်.
ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်သင့်အားစနစ်အားသတ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်ခြင်းများအတွက်ပြသနာများရှိပါကသင်၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းကိုဘက်ထရီ - အသုံးချပရိုဂရမ်များစာရင်းမှဖယ်ရှားပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android P အကြောင်းကြားစာကုလားကာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ